Maxkamadd Ku Taala Canada oo Dib u Dhagaysanaysa Dacwadd Loo Heysto Muwaadin Soomaliyed - Xigasho.net | Xigasho.net
Maxkamadd Ku Taala Canada oo Dib u Dhagaysanaysa Dacwadd Loo Heysto Muwaadin Soomaliyed
Maxkamad ku taalo dalka Canada ayaa ku celisay in ay dib u dhagaysan doonto codsiga hakinta musaafurinta wiil Soomaaliyeed.
Maxkamad fadaraali ah oo ku taalo gudaha dalkaasi Canada ayaa aqbashay in isbuucan ay dhagaysato codsiga ah in si kul meel gaar ah loo hakiyo musaafurinta Abdoul Abdi oo ah wiil Soomaaliyeed oo loo haysto dambiyo kala duwan.
Abdoul Abdi oo aanan haysan dhalashada dalka Canada ayadoona loo diiday in lasiiyo dhalashadaas kadib markii lagu helay dambiyo kala duwan ayaa ah wiil soomaaliyeed oo si qaxooti ahaana ku tagay gudaha dalkaasi Canada asaga, walaashiis, iyo habaryartiis.
5 sano oo xarig oo uu ku soo qaatay abdoul xabsi ku yaalo Canada ayaa waxa ay maxkamad ku taalo dalkaasi Canada amartay in dib loogu celiyo abdi dalkiisa hooyo ee Somalia ayadoona racfaan ay ka qaateen abdi iyo qareenkiisa maxkamadu ay si komeel gaar ah u joojisay musaafurinta Abdi.
Arintan Abdoul Abdi ayaa soo cusboonaantay kadib markii wasiirka badbaadada dalka Canada uu ka hor yimid amarka maxkamada ee ahaa in si kulmeel gaar ah loo hakiyo musaafurinta abdi.